Massimo Dutti dia manolotra ny trano fanontana vaovao SS21: New Edgy | Bezzia
Maria vazquez | 09/06/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Vao haingana i Massimo Dutti no nanolotra vaovao lohataona-lohataona-fahavaratra 2021. Fanontana iray izay ambanin'ny lohateny New Edgy dia manolotra tolo-kevitra ho antsika isan'andro isan'andro ary afaka mizara izany ny hafa natontan'ny orinasa teo aloha ny fanoloran-tena amin'ny paleta voajanahary, na dia misy nuansa manaitra aza.
Rehefa mijery an'i New Edgy ianao, ny zavatra voalohany manintona ny masonao dia ny fahalehibiazana izay raisin'ny akanjo sasany toy ny pataloha rongony vita amin'ny lambam-pandriana, mamatotra lobaka vita amin'ny loko ary t-shirt misy tadiny. Akanjo natao ho an'ny mankafy ny fahavaratra amin'ny fiononana.
1 Ny paleta miloko
3 Ny tena ilain'ny Massimo Dutti
Ny paleta miloko
Zatra amin'ny famoahana lahatsoratra izay mpandala ny nentin-drazana kokoa ny resaka loko, ny paleta miloko toy izany izay nifidianan'ny orinasa momba izany. Paleta miloko mamirapiratra izay atambatra amin'ny feo mavitrika hafa ny feo tsy miandany toy ny voasary, mavokely ary maitso.
Ao amin'ny trano famoahana boky izay misy tsotra ny ankamaroan'ny akanjo, dia tsy voamariky ny olona. Tena tianay ny lobaka sy ny zipo napetraka amin'ny loko fotsy, volontany sy manga vita amin'ny lamba landy sy landy. Fa vao mainka aza ilay lobaka miloko volomboasary sy mavokely, vita amin'ny lamba ramie 100%.
Ny tena ilain'ny Massimo Dutti
ny pataloha rongony vita amin'ny fehikibo lasa akanjo tena ilaina ho an'i Massimo Dutti izy ireo amin'ity vanim-potoana ity. Amin'ny loko tsy miandany dia be dia be izy ireo, na izany aza, tsy azontsika atao ny manala ny masontsika amin'ilay maodely misy amin'ny loko maintso sy volomparasy ao amin'ity lahatsoratra ity. Ary tianay ny hevitra atambatra azy amin'ny lobaka sy palitao misy tratra roa.
Ny knitwear dia fanalahidy iray hafa amin'ny famoriam-bola, indrindra ny zipo feno hafanana sy tampon-tanky taolana. Miaraka amin'ireo koa dia misongadina ny akanjo ambony na akanjo lobaka izay palitao ary ny loko toa ny beige na khaki dia mitambatra amin'ny zavatra rehetra.
Tianao ve ireo tolo-kevitra vaovao avy amin'ny orinasan'ny vondrona Inditex?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Massimo Dutti dia manolotra ny trano fanontana vaovao SS21: New Edgy